तपाईलाई कतै यस्ता लक्षण त छैनन् ? त्यसो भए आजै चेकजाँच गरिजानुस् ! - HelloKhabar
एजेन्सी । मानिसमा लाग्ने ठूला रोगहरु निको हुँदैनन् । ती रोगहरुले शरीरका विभिन्न अंगहरुमा असर गरिरहेका हुन्छन् र हाम्रो शरीरलाई भित्रै देखि खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ । निको नहुने त्यस्ता रोगहरुले जब हाम्रो शरीरलाई खोक्रो बनाइदिन्छन् तब मात्र हामीले थाहा पाउँछौं, तर त्यतिबेला रोगले हाम्रो जीवनलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याईसकेको हुन्छ।
निको नहुने भनिएका रोगले हाम्रो शरीरका विभिन्न अंगहरुमा आक्रमण गर्छन् । जब रोगले आक्रमण गर्छ, तब हाम्रा अंगहरुले हामीलाई संकेत दिइरहेका हुन्छन् । यदि त्यो संकेतलाई बुझ्न सक्यौं भने हामीले रोगको सुरुवाती अवस्थामा नै उपचार पाउँछौं र रोगकै कारण जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन।
मधुमेह भएपछि छिटो छिटो पिसाब लाग्ने समस्या हुन्छ । शरीरमा चिनीको मात्रा बढेपछि हाम्रो मृगौलाले तरल सोस्न सक्दैन, जसले गर्दा तरल छिटो छिटो बाहिर निस्किन खोज्छ र छिटो छिटो पिसाब लाग्छ । मधुमेहको अर्को लक्षण मुख सुक्नु पनि हो । शरीरले तरल पदार्थ लिन नसक्नु, छिटो छिटो पिसाब लाग्नु आदि कारणले गर्दा शरीरमा तरल पदार्थको कमी हुन्छ र मुख सुक्छ।
मधुमेहको अर्को लक्षण पिसाबमा संक्रमण, गुप्ताङ्गमा विभिन्न रोग तथा घाउ खटिरा हुनु पनि हो । मधुमेह भएपछि हाम्रो छाला सुक्खा हुन्छ । रगतमा चिनीको मात्रा बढेपछि शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ। धेरै चिनीले गर्दा शरीरमा पसिना उत्पादन गर्ने ग्रन्थीमा पनि हानी पनि हानी पुग्छ र पसिना उत्पादन हुँदैन । यसले गर्दा शरीरको छाला तथा कपाल सुख्खा हुन्छ ।
के महिलाको शरिरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले टोकेर हो ? जान्नुहोस यस्तो छ यथार्थ
बिहान सबेरै उठेर यी ५ काम गर्नुहोस्, पाउनुहुनेछ यस्ता फाइदा
टनसिलले हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् सजिलै समाधान
मुख्य समाचार हेलाेखबर - October 31, 2020
प्रहरीको दशैँ: कोभिडबाट नागरिकलाई सुरक्षित पार्नमै ध्यान
मुख्य समाचार October 31, 2020
आर्थिक October 31, 2020
कोरोना संक्रमित बढेपछि फ्रान्समा फेरि देशव्यापी लकडाउन
मुख्य समाचार October 29, 2020
मुख्य समाचार October 28, 2020